Khabar Nirantar | » प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच विकल्प – Khabar Nirantar
August 9, 2020, Sunday
२०७७ श्रावण २६, सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच विकल्प
२०७७ असार १९
काठमाण्डौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शार्मा ओलीले अठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सत्तारुढ नेकपाअब फुटको संघारमा पुगेको छ । बालुवाटारमै भएको स्थायि समिति बैठकमा जानइन्कार गर्नु र पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुसँग नै भेट्न अनिच्छिुक भएका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरेर संसदीय दलमाआफ्नो पकट कायम गर्ने रिहर्सल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो तयारीले अब नेकपा लगभग फुटको अन्तिमत यारीमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । इतर पक्षपनि करीब करीब नेकपा फुटिसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबारको बैठकमा र्नै पहिलो अध्यक्षले नै पार्टी फुटाएको’ आरोप लगाईसको छन् ।
नेकपा भित्रको यो पेचिलो विवादका बीचअब एकहुनका लागि केही विकल्पमात्र बांकी छन् भने ओली प्रधानमन्त्री बनिरहनका लागि थुप्रै विकल्पहरु छन् ।केही विकल्पहरुको यहाँचर्चा गरिएको छ ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएरै पदमा टिक्ने
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्र्दभमा अब ओली सँग जम्माजम्मी दुई विकल्पमात्र छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीओलीले आत्माआलोचना गरेर पार्टी कमिटी निर्णयलाई मान्ने संकल्प गरे भने तत्कालका लागि इतर खेमादाहाल नेपाल गुटचुप लाग्ने अवस्थाहुन सक्छ । तर यो संभावनाक म छ । प्रधनमन्त्री ओलीआफुलाई लागेको विषयमा पछि हट्ने स्वभावका छैनन् । र उनले अहिले सम्मपनि आफुले गल्ती नगरेको बताईरेहका छन् । पार्टीलाई एक बनाउनका लागिअर्को विकल्प भनेको त्याग हो । इतर पक्षले भने जस्तै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये दुवै वा एक पद मात्र छोडि दिएभने पनि तत्कालका लागि नेकपा विवाद मिल्न सक्छ । जुन विकल्प त झनओली सुन्न पनि तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकटका मार्फत दुवै पदमाआफु निर्वाचित भएर आएकाले छोड्नै नसकिने अडान राखि सकेका छन् । ओलीका तर्फबाट पार्टीलाई एक बनाउन यी विकल्पबाहेक अन्य छँदैछैन ।
पार्टी एक बनाउन नसकिए के गर्ने त ?
यदि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर आफु सोहीपदमा टिकिरहने अवस्था नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अरु थुप्रै विकल्प छन् । त्यस मध्येका केही विकल्प प्रधानमन्त्रीओलीले प्रयोगमा समेत ल्याउन थालिसकेका छन् । पार्टीलाई एक बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीओली सबै हतकण्डा अपनाएर पनि सत्तामा टिकिरहन चाहान्छन् । त्यसकालागि नै सबैलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले ओलीले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरीदिएका छन् । संसद नचलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के फाईदा पुग्छ त भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । संसद चलेको बेलाकुनै पनिअध्यदेश ल्याउन नपाउने संवैधानि कव्यवस्था छ । आफु अनुकुलअध्यदेश ल्याउन अब ओलीलाई बाटो खुलेको छ । उनले अब ४० प्रतिशत सदस्य सँख्या संसदीय दलवा पार्टी केन्द्रीय समिति जहाँ पुगेपनि फुटेको दलको मान्यता पाउने गरी कानुन अध्यदेशबाट ल्याउन सक्छन् । जुन उनि प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने उउटा विकल्प हुन्छ । यदी नेकपाको बहुमतले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटायो भने ओलीले संसदीय दल फुटार नयाँ दल खोल्न सक्छन् । यसअघि नै ओलीलाई जोडेर नेकपा एमाले दर्ता भएको चर्चा चलिसकेको छ । त्यो अवस्था भएमाआफुसँग भएका सांसद र अन्य वर्तमान विपक्षीहरुलाई लिएर ओलीले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरतादिन सक्छन् ।
यदी यो बाटो सहजलागेन भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगअन्य विकल्प पनि छ । त्यसका लागि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ लिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीको बलियो साथ छ भन्ने समयक्रमले पुष्टी गरीसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीओलीले संकटकाल घोषणा गरेर आफु टिक्ने बाटो रोज्न सक्छन् । त्यति पनि भएनभने प्रधानमन्त्रीओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यवधिमाजाने बाटो पनि रोज्न सक्छन् । तर यो बाटो त्यति सजिलो नहुने हुँदाओलीको रोजाई बैशाख पहिलो हप्ताल्याएको दलदर्ता सम्बन्धी अध्यदेशलाई पुर्नजिवित गरी अन्यदलसँगको सहकार्यमा सरकारमै टिकिरहनु हुन सक्छ ।
उपत्यकामा आज थप ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालमा आज थप ३८० जनामा कोरोना पुष्टि
कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ७५ पुग्यो
पार्टी एकता कायम राख्न शीर्ष नेतालाई नेकपा सांसदको दबाब
पूर्वक्रिकेटर पवन दासलाई कोरोना भाइरस संक्रमण
नेपालको बागवानी क्षेत्रमा सन्चालन भएका मिसन कार्यक्रम समिक्षा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका कार्यदिशा
दुई साता लकडाउन गर्न विज्ञहरुको सुझाव
कोरनाको आशंका लागे यी अस्पताल जानुस्
नेपालका १२ जिल्लामा निषेधाज्ञा, विभिन्न क्षेत्र सील
२०७७ श्रावण २१
सरकारलाई देख्ने र सुन्ने गरी भनौँ – सरकार अब अति भो !: गगन थापा
के. एन. मीडिया प्रा. लि.
Phone No. :- 977-9851189115
सह-सम्पादक : जमुना सापकोटा
समाचार संयोजक : अजय तामाङ्ग
विशेष सम्वाददाता : निकिता शर्मा